Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » ndị mmadụ » Gaa na Carlsbad mara ọkwa ọkwa onye isi ọhụụ
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Gaa na Carlsbad mara ọkwa onye isi ọhụụ, Kim Sidoriak
N'ime ọrụ ọhụrụ ya dị ka Onye isi ala & onye isi oche nke nleta Carlsbad, Kim na -atụ anya iso ndị obodo na azụmaahịa mpaghara na -emekọrịta ihe iji kwalite ebe aga nke ọma yana ijikọ Nleta Carlsbad persona na obodo na azụmaahịa ọ bụla. Ọ na -ezube ibuli ebe ọ na -aga na ọkwa mba ma nwekwuo visibiliti n'ime ahịa ndị bụ isi, ebe ọ na -eji nyocha data mee mkpebi nke ọma gbasara oke na nnabata nke nzukọ a.
Nzukọ azụmahịa maka obodo Carlsbad, California na -akpọ CEO ọhụrụ.
Kim Sidoriak bụ onye isi ọrịre ahịa Santa Monica Travel & Tourism tupu iweghara nleta Carlsbad.
Gaa na Carlsbad bu n'obi ibuli Carlsbad dị ka otu n'ime ebe nlegharị anya mbụ na Southern California.
Gaa na Carlsbad, nzukọ azụmaahịa na -aga maka Obodo Carlsbad, ekwuputala nhọpụta nke onye isi na onye isi ọhụụ, Kim Sidoriak.
Tupu isonye na ndị otu nleta Carlsbad, Kim bụ onye isi ọrịre ahịa maka Santa Monica Njem & njem nlegharị anya ebe ọ na -ahụ maka atụmatụ, ụzọ na mmemme nke wusiri mmasị, ịchọ na nnabata Santa Monica.
Site na mmegharị a, Kim ga -arụ ọrụ Gaa na Carlsbad otu na ndị nwere oke mkpa iji bulie Carlsbad dị ka otu n'ime ebe nlegharị anya mbụ na Southern California.
At Santa Monica Njem & njem nlegharị anya, onyinye Kim gụnyere imezigharị njirimara akara ngosi nke Santa Monica na ịmalite atụmatụ atụmatụ afọ ise nke nzukọ a. Ọ bụkwa onye otu Kọmitii Akara California na Ọdịnaya wee nweta nzere Executive Executive Certified Destination Management Executive site Destinations International.
Nkwaga na Carlsbad, na-eme ka Kim bịaruo ezinụlọ nso na Kim na-ezube ịbụ onye otu ogologo oge na mpaghara mpaghara na San Diego North County. Sidoriak kwuru, onye jikwa ọrụ na nkwukọrịta ahịa maka Hilton Hotels Corporation na Saatchi & Saatchi Advertising kwuru, "Enwere m obi anụrị ịbịaru ndị ezinụlọ anyị nso, na -atụkwa anya nke ukwuu ịbụ onye na -arụsi ọrụ ike n'obodo Carlsbad mara mma."
N'ime ọrụ ọhụrụ ya dịka Onye isi ala & onye isi oche nke Gaa na Carlsbad, Kim na -atụ anya ka ya na ndị obodo na azụmaahịa mpaghara na -emekọrịta ihe iji kwalite ebe ọ na -aga nke ọma yana ijikọta Nleta Carlsbad persona na obodo na azụmaahịa ọ bụla. Ọ na -ezube ibuli ebe ọ na -aga na ọkwa mba ma nwekwuo visibiliti n'ime ahịa ndị bụ isi, ebe ọ na -eji nyocha data mee mkpebi nke ọma gbasara oke na nnabata nke nzukọ a.
Troy Wood, Onye isi oche maka nleta Carlsbad na -ekwu, "Kim na -eweta ahụmịhe zuru oke, ebumnuche na ụdị onye ga -eduzi nzukọ nzukọ ebe a. Ọchịchọ Kim, ịnya ụgbọ ala na ikike ịrụ ọrụ maka ọdịmma obodo ga -enyere aka ibuli nzukọ na obodo ọnụ. "
Kim nwetara nzere bachelọ na nka na nkwukọrịta site na Mahadum Southern California na nnukwu ihe na -agụ ya agụụ bụ ịgagharị ụwa iji mụta maka ọdịbendị dị iche iche.